Tsy lasa tamin’ny fiaramanidina tokony hiaingana’izy ireo ho any Maorisy mankany Dubai, hahatongavana any Casablanca ny AS Adema, omaly.
« Tsy nifankahazo ny mpitantana sy ny mpiasan’ny orinasa izay mikirakira ny dia (agence de voyage) iray ka feno tampoka indray ny fiaramanidina tokony handehanan’izy ireo », hoy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny AS Adema. Omaly tontolo dia nikaroka hevitra avokoa ireo rafitra rehetra mitantana an’ity klioba ity ny amin’izay handehanana, saingy tsy nisy mangirana izany, araka ny nambaran’ity tompon’andraikitra ity.
Efa tonga hatramin’ny fiantsoana tany Maraoka ny amin’ny mety hanemorana ny lalao noho izay mety ho fahataran’izy ireo aza. « Tsy nisy fiaramanidina azo nofaina mihitsy hahafahana manatanteraka ity dia ity androany (omaly). Tsy maintsy mitady hevitra faran’izay haingana noho izany izahay eto anivon’ny AS Adema mba tsy hanala baraka », hoy io loharanom-baovao io.